Faahfaahin Laga Helayo Weerar Culus Oo Ka Dhacay Jannaale. – Bogga Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Weerar Culus Oo Ka Dhacay Jannaale.
Tafaasiil dheeraad ah waxay kusoo baxayaan weerar khasaare dhaliyay oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan shabaabul Mujaahidiin ay ku qaadeen saldhig ciidan oo maleeshiyaadka dowladda federaalka ah ay ka samaysteen degmada Jannaale ee wilaayada Sh/hoose.
Weerarkan oo ahaa mid toos ah waxay ciidamada jamhadda Mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ah ay kaga suganyihiin buundada wayn ee degmada Jannaale waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Ciidamada shabaabul Mujaahidiin dhowr jiha ka weerareen gudaha saldhigga waxaana halkaas ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada kooxda Farmaajo. ilowareedyo muhiim ah waxay xaqiijiyeen in weerarkaas qorsheysan lagu dhaawacay 3 askari oo ka tirsan ciidamada federaalka.
Ilo wareedyadu waxay intaas ku dareen in askarta weerarka lagu dhaawacay uu mid ka mid ahi dhaawaciisu yahay mid garaab ah waxaana dhammaan dhaawacyadooda loola cararay cisbitaallada ciidanka dowladda federaalka.